Ciidamada nabad sugida Qaranka oo baaritaano ka wada xaafadaha magaalada Jowhare ee Gobolka Sh/Dhexe
Ciidamada nabad sugida Qaranka oo baaritaano ka wada xaafadaha magaalada Jowhare ee Gobolka Sh/Dhexe.
Ciidamada nabad sugida Qaranka ee sida gaarka ah u tababaran oo shalay gaaray magaalada Jowhar ee gobolka Sh/dhexe ayaa saaka xaafadaha magaaladaas ka bilaabay howlgalo ballaaran oo baaritaan ah.
Dadweynaha magaalada Jowhar ayaa sheegaya in ciidamada baaritaanada wada ay guri guri u galayaan xaafadaha magaalada, iyagoo ka dibna qabqabanaya ragga gaar ahaan dhalinyarada ay uga shakiyaan iney ka tirsan yihiin xoogagii Al-shabaab ee magaalada lagala wareegay labo maalmood ka hor.
“Ciidamada nabad sugida ayaa guriga noogu soo galay qol qol ayey u baareen, waxayna fatasheen sanaadiiq iyo waxyaabo kale oo guriga ku jiray aniga iyo caruurteydiina meel gaar ah bay iskugu keen geeyeen hase ahaatee waxay naga qaateen ma arag, waxbana nama yeelin weyna naga tageen si khal khal badan oo aanu ka argagaxnay ayey guriga ku soo galeen” sidaa waxaa yiri nin magaciisa ku sheegay Maadey oo ka mid ah shacabka degan Jowhar oo ka waramayey qaabka ay u socdaan howlgalada.
Ciidamada nabad sugida ayaa waxaa la sheegay in dad fara badan ay soo qabqabteen isuguna geeyeen meelo gaar ah oo ka tirsan magaalada Jowhar, iyadoo saraakiishooduna ay sheegeen in la baarayo cidii dembi lagu waayana la sii deynayo.
Dhinaca kale labo maalin ka hor ayey aheyd markii ciidamada dowlada iyo kuwa AMISOM ay la wareegeen magaalada Jowhar iyadoo uusan wax dagaal ah dhicin ka dib markii xoogaga Al-Shabaab ay halkaas isaga baxeen markii ay ka war heleen duulaanka magaalada ku soo wajahan, waxaana shalay booqday wasiirka difaaca C/xakiin Xaaji Fiqqi iyo saraakiil fara badan.